မိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှ အော်သံများ: အက်ကွဲခြင်းလရောင်
“အမယ်လေးဟယ်။ ကြည့်ပါဦးထွန်းထွန်းရယ်။ ရည်းစားစကားပြောပြီးတော့များသူကပဲရှက်နေရတယ် ရှိသေး။ငါကမိန်းကလေးပါဟဲ့ …၊ ငါ ရှက်ဖို့လည်းနည်းနည်းလောက် ချန်ထားပါဦးနော်။”
ပြုံးယောင်သမ်းနေသောသူမမျက်နှာကိုမရဲတရဲတွေ၍ကြည့်မိ။နှုတ်ဖျားမှ စကားသံတိုးတိုးဖွဖွ မ၀ံ့မရဲ တိုးလျှိုခုန်ထွက်လာခဲ့။
“ငါ…ငါ ..တောင်းပန်ပါတယ် ၊ မိဖြူရယ်။ ငါ ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ပါ။ ငါ့စကားကိုနင်စိတ်ဆိုးသွားရင် ပြန်ရုတ်သိမ်း ငါ…လေ”
ကျွန်တော့်စကားမဆုံးမီပင် သူမမျက်နှာတည်သွား။ ရယ်ဟဟ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကိုခပ်စူစူလုပ်ပစ်သည်။ အို…လှပစွာယိမ်းနွဲ့နေသောပန်းပွင့်လေးရေ….အမူအယာအမျိုးမျိုးလုပ်တတ်ပါပေ့ ။ စိတ်ပုပ်မလေးရယ် …၊ လူတော့ ရူးရပြီထင့်။
“ယောင်္ကျားဖြစ်ပြီးတော့များ ..စကားကိုအခုတစ်မျိုး၊တော်ကြာတစ်မျိုးရည်စားစကားပြောတာ ပြန်ဖျက်သိမ်းလို့ရတဲ့ကိစ္စ လား။ ပြောပါဦး ၊ နင်နဲ့ငါ အငယ်လေးတည်းကပေါင်းလာတာပဲဒီလောက်တောင် ငါ့အကြောင်းမသိဘူးလား..ဟင် ၊ထွန်းထွန်း”
သူမမျက်နှာလှလှကိုမှင်သက်ငေးမောနေရာမှ ပြေပြေလေးယှက်သန်းသွားသောရှက်ရိပ်ကိုလှစ်ခနဲ ကျွန်တော်ဖမ်းမိသွားသည်။ သူမမျက်ဝန်းထဲ စကားလုံးတချို့ကိုလည်းဘာသာပြန်ကြည့်မိသည်။
ပြောပြောဆိုဆိုပင် သူမလက်ချောင်းပုပုဖောင်းဖောင်းလေးတွေကိုဆတ်ခနဲကိုင်ဆုပ်မိသည်။အို… ဘယ်လောက် ပွင့်လင်းတဲ့ကောင်မလေးပါလိမ့်ကွယ်။ အခုမှ… ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပင် သူမခေါင်းလေးကို ရှက်ဝါးဝါးလေး ငုံ့လိုက်ပါ တော့သည်။
ထို့သို့ဖြင့် သူငယ်ချင်းဟူသောအဖြူသက်သက်စည်းလေးကို နှစ်ဦးသဘောတူဖျက်ပစ်ခဲ့ကြ။
×××××××××××××× ×××× (၂)×××× ×××××××××_×_×_×_×_×_×_×
ကျွန်တော့်လက်ထဲဖူးပွင့်ခိုတွဲလာသောကဗျာတစ်ပုဒ်သည် သူမဖြစ်ခဲ့ပါသည်။သူမမျက်တောင်အကြွေတွေကို ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ထဲတွင် တယုတယ ပျိုးကြဲစိုက်ပျိုးထားချင်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်နှင့်သူမ ငယ်သူငယ်ချင်းဘ၀မှ ချစ်သူဘ၀သို့ အကူးအပြောင်းသည် လှပယိမ်းနွဲ့။
ပျိုမြစ်နေသည့် မီးတောက်များထဲသို့လည်းတစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်ဆုပ်၍ ကူးခတ်ခဲ့ကြ။
နွေတစ်ခု ၊ ဆောင်းတစ်ထည် ၊ မိုးတစ်လွှာဖြင့် လျှောခနဲလျှောခနဲခုန်ဆင်းသွား။
×××××××××××× × ×××××(၃)×××× ××××××××××××××××××
ထိုနေ့က ကျွန်တော်နှင့်သူမချိန်းတွေ့နေကြမြေသားလမ်းအိုလေးနံဘေးမှ ယိုင်နဲ့နဲ့ခုံတန်းလျားလေးတွင် လအရိပ်လေးသည် ပျော့ပျော့အိအိထိုးကျလျက်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားအချိန်အတော်ကြာတိတ်ဆိတ်နေမိကြသည်။ သို့မဟုတ် ကျွန်တော် တို့နှစ်ဦးသားတစ်ယောက်နှုတ်ဖျားမှ ထွက်ကျလာမည့်စကားသံများကိုအပြန်အလှန်ကြောက်လန့်နေမိခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
“မောင်ရယ် ၊ ကဗျာတစ်ပုဒ်လောက် ရွတ်ပြပါလားကွာ။”
သူမအသံနွဲ့နွဲ့ကလေးဖျော့နေသည်။ ခရီးဝေးတစ်ခုကို ပြေးလွှားခဲ့ဟန် မောနေသောအသံနွမ်းလျလျ။ ချစ်သူသက်တမ်းနှစ်နှစ်အတွင်းသူမအတွက် ကျွန်တော်ရေးပေးခဲ့ဖူးသောကဗျာများကိုသူမကတခုတ်တရသိမ်းထားလေ့ရှိပါ သည်။သတိတရနှင့် မကြာခဏ ပြန်ဖတ်လေ့ရှိသည်ဟုတော့ဆိုသည်။ ဟုတ်၊ မဟုတ်တော့မသေချာ။ သို့သော် ရုတ်တရက် ခေါင်းထဲရောက်လာသောဆရာကြည်အောင်၏ အချိုးတစ်ခုကိုရွတ်ပြလိုက်မိ။
မောင့်အချစ် ၊ မျှစ်ချိုးလိုက်ခဲ့။”
ရုတ်တရက် လွင့်စင်ကျလာသောမူနွဲ့နွဲ့အပြုံးသည် ခါတိုင်းလိုလန်းဆန်းသစ်လွင်မနေ။ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်လက်စမျက်လုံးရွဲရွဲ ပေါ်တွင် သက်ပြင်းသံသဲ့သဲ့ကိုစည်းချက်လိုက်နေစေသည်။ ညသည် သက်မချသံများအောက်တွင် လှပမှုတို့ဝေးလွင့်။ စူးနင့်စွာနာကျင်ကြ။ ကောင်းကင်ကလသည် တိမ်မည်းထုအောက်သို့တိုးဝင်။ လောကတစ်ခုလုံးအမှောင်ဖုံး။
နှစ်ဦးစလုံးကြားတွင် ကိုယ်စီသိထားပြီးသောအဖြေတစ်ခုကခန့်ခန့်ထည်ထည်။ ကူကယ်ရာရှာဆဲ။ မိဘစကားနားထောင်ရမတဲ့။ ဆရာကြည်အောင်၏ကဗျာထဲကမောင့်အချစ်က မျှစ်ချိုးလိုက်မလိုက်တော့မသိ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကျားဆိုးတွေနှင့် သူတင်ကိုယ်တင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် အရိပ်အယောင်တွေကအတိုင်းသား။ သတ္တိနည်းသလားဟုလည်းသူမကိုမမေးရက်ချင်တော့။ ကိုယ်မလိုချင်တာတွေ တနင့်တပိုးရနေသည်ကိုကလောက၏ ခမ်းနားသည့်တင်ဆက်မှုလား။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်းမဝေခွဲ ။ သူမကတော့ ကောင်းကင်ရှိပေါ်မလာနိုင်သေးသောလကို မျှော်လင့်တကြီးတောင့်တနေဆဲ။
စက္ကန့်များရွေ့လျားခုန်ကူးနေသံကတစ်ချက်ချက်။ တိတ်ဆိတ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သက်ပြင်းချသံတို့သည် ကျယ်လောင်အက်ရှ နေသည်။
“ဒါဆိုသူတို့ …..သူတို့ စကားကိုနင်နားထောင်တော့မှာပေါ့ …မိဖြူရယ်…၊ နင်”
ကျွန်တော့်တွင် ရှေ့ဆက်ပြောရန် အားအင်တွေတိုးဖျော့သိမ်ငယ်နေလေပြီ။ မိုင်ပေါင်းများစွာပြေးလွှားခဲ့သော တာဝေးအပြေးသမားတစ် ဦးပမာအသက်ရှူသံတို့ ပြင်းပြလှိုက်ဖိုနေမိ။ သေချာကြည့်မိဆိုပါက ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွင် ရီဝေခါးသက်စွာ အက်ကွဲနေသော ၀မ်းနည်းမှုထုထည်ကို သူမမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
“ မောင်ရယ် ။ ငါရော ၊ နင်ရောဘာတတ်နိုင်လို့လဲ။ နင်လဲအခုထိအလုပ်မှ မယ်မယ်ရရမရှိသေးတာ။
မေမေပြောပြောနေသလိုပဲအသက်တွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာ။ ငါ အရင်တည်းကနင့်ကိုပြောခဲ့ ၊ပြောနေတာပဲ
အဲဒီ့လူကြီးကိုလည်းမုန်းလိုက်တာလေ။ ငါ …ဟာ…သေချင်…တော့…တာပဲ”
သူမအသံစွတ်တုန်ခါ၍တိုးဖျော့သွား။ ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးပေါ်သို့ ပူနွေးသောမျက်ရည်စက်များ ။ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ တင်းခနဲ။
ကျွန်တော့်မကျေနပ်ချက်ကိုလှစ်ဟပြရုံတောက်ခေါက်သံမှာ မှုန်ဝါးတိုးဖျော့စွာ။ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲတွင် တဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲလာ သောပိုးမွှားပေါင်းများစွာနှင့်။
“ဒါဆို … ဒါဆိုသူစေ့စပ်ရတော့မှာပေါ့ ။ ဒါဆို…..ငါ…ဘယ်လို”
စကားတို့ ထစ်..အ..တိမ် ၀င် သွား။
ကျွန်တော် လက်မခံချင်သောအမှန်တရားက ခါးသက်ညိုမွဲစွာစီးဝင်ပါသည်။ သူမပုခုံးသားအိအိကိုထွေးပွေ့ထားရင်း ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှတတွတ်တွတ်။ စိတ်ပုပ်မလေး ၊ မစိတ်ပုပ်လေးရယ် ။ အို… ဒဏ်ရာမြစ်ထဲရဲရင့်စွာပစ်ချခဲ့ပါတော့ကွယ်။ နှစ်ဦးသဘောတူမက်ခဲ့ကြ သောအိပ်မက်များ တုန်ဝါးပါးလျလာ။ သေဆုံးလုဆဲဆဲ ရင်ခုန်ပန်းပွင့်များ သွေးရောင်ဖျော့။
“ တစ်ခုခုပြောဦးလေ။ တစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် ၊ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖြစ် ရွတ်ပြဦးလေမောင်ရယ် ၊ အဲလိုတိတ်တိတ်ငြိမ်မနေပါနဲ့။ ငါကြောက်
တယ်။ နင်နဲ့လေ…. မ..ခွဲ ။ အို…ဟာ ငြိမ်မနေပါနဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်ပြောပါ ..ဟာ”
သူမမျက်တောင်တွေ တဖျပ်ဖျပ်လှုပ်ခတ်နေသည်။ ပန်းအိုးထဲတွင် ထိုးစိုက်ထားသောပန်းပွင့်လှလှတစ်ပွင့်၏ရိုးတံလိုညွှတ်သွယ်ပျော့ ပျောင်းလေသောလည်တိုင်နုနု။ လေးကိုင်း
လိုကွေးညွှတ်အိထွေးနေသည့်နှုတ်ခမ်းလွှာလေးများ။ လေညှင်းရယ်သံများ။ ပါးပြင်မြမြပေါ် မှသွေးကြောစိမ်းစိမ်းတို့ ။ ကျွန်တော် ဆုံးရှုံးရတော့မည်လား။ ရင်ခုန်ဦးမို့ စူးစူးနစ်နစ်ချစ်နေ။ သွယ်လျပျော့ပျောင်းသည့် သံယောဇဉ် လက်ချောင်းမျာဖြင့် ကျွန်တော်နှင့်သူမကိုရစ်ချည်ဖွဲ့ထုံးထားခွင့်မရှိတော့ပြီလား။
“ဟင့်အင်း ၊ ဟင့်အင်း။”
ကျွန်တော့်စကားလုံးတွေ မပီမသ၀ိုးတ၀ါး။ စိတ်အာရုံသည် ထွေပြားနောက်ကျိလာခဲ့။ အဖြစ်မှန်တို့ကိုလက်ခံရန် ကျွန်တော့်တွင် ခက်ခဲလှပါသည်။ မည်သို့မှ ထိန်းချုပ်မရဘဲ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတို့လည်း စွတ်စိုလာခဲ့။ မျက်တောင်ကိုတဖျပ်ဖျပ်ခတ်မိသည်။ စိတ်ခံစားမှု၏နာကျင်ဒဏ်ရာများကိုလှီးလွှဲပစ်ရန် ကျွန်တော် ခပ်ဖော့ဖော့ရယ်ပစ်လိုက်သည်။ သေချာပါ သည်။ ကျွန်တော့်ရယ်သံတို့သည် မိုးခေါင် ရေရှား ရပ်ဝန်းတစ်ခုကို ဖြတ်တိုက်လာသောလေနီကြမ်းများပမာပူနွေးခြောက်ကပ်နေပါလိမ့်မည်။
စက္ကန့်သံများကတစ်ချက်ချက်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တော်တော်ကြာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်မှုကြားထဲသို့ရောက်ရှိ သွားကြပြန်သည်။ နှေးကွေးလေးလံစွာသွားနေသောနာရီသံတို့သည် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအတွက်ပေါက်ကွဲတော့မည့်ဗုံးတစ်လုံး၏အော် မည်သံပမာလေးလံဖိစီးလာပါသည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ပြိုင်တူလိုလိုပင် တစ်ယောက်လက်ကိုတစ်ယောက် လွတ်ထွက်သွားမည့်အလားခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်မိကြသည်။ သို့သော်………….။
“မောင်ရယ် ၊ မှာထားတာတွေကိုဂရုစိုက်ပါနော်။ ပေတေတေလည်းမနေနဲ့။ စာတွေ ကဗျာတွေချည်းလဲရေးမနေနဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ် ဖြစ် နောက်မတွေ့ကြတော့ရင်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပြောထားတာတွေကိုနားထောင်ပေးပါနော်”
မစ်ိတ်ပုပ်လေးရယ်၊ တို့နှစ်ဦးသားအတွက် ဒဏ်ရာတွေသာဒဟဟောယိုစီးထွက်လာပါပကော။ သူမမျက်ဝန်းတို့သည် မှုန်ဝေကွဲရှလျက်။ သူမအသံတို့သည် ကျွန်တော့်နားထဲဝယ် ၀ိုးတ၀ါး။ အသိအာရုံသည်လည်းအေးစက်ထုံထိုင်းနေသည်။
သူမမျက်ခွံ့တို့ နီမို့လာ၏။ ကျွန်တော့်ရင်တွင်းဝယ် ခွဲခွာခြင်းရထားသည်စူးစူးဝါးဝါး ဥသြသံကိုဆွဲနေလေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ တိတိပပဝေးကြရပေတော့မည်။ ကျွန်တော့်ပုခုံးတွင် မှီထားရာမှ သူမရုတ်တရက် မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ငေးကြောင်ဝေတွေ သောမျက်လုံးဖြင့် မော့ကြည့်မိသည်။ မိဘစကားနားထောင်ရတော့မည်တဲ့။ ထားခဲ့ပါဟုမပြောသာ။ လိုက်ခဲ့ပါဟုမဆိုရဲ။ မည်သို့မှမသေချာသောအနာဂတ်သို့ သူမကိုဆွဲခေါ်နိုင်စွမ်း ကျွန်တော့်တွင် အားအင်မရှိပါ။ ကျွန်တော် ပြောစရာစကားလုံးတို့ တိတ်ဆိတ်စွာပျောက်ရှ။
“ ပြန်ကြပါစို့ ။ အခုလည်းမနည်းထွက်လာရတာ။ နောက်ဆိုလဲ …. တွေ့ဖို့ကမရတော့ပါဘူးလေ။ နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ပဲဟိုလူကြီးရဲ့မိဘတွေကလာကြောင်းလမ်းတော့မှာ ..၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ခုနမှာတာတွေကိုမမေ့ရဘူး။ ထမင်းလဲပုံမှန်စားနော်။ ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်ပါ။ သွားတော့မယ် ဟာ”
ကျွန်တော့်တွင် မိန်းမောနာကျင်စွာငေးရီကြည့်ရုံမှတပါး နှုတ်ဆက်စရာစကားလုံးတို့မရှိတော့ပါ။ ခုံတန်းလျားလေးမှ ထကာမြေလမ်းအိုလေးအတိုင်းသူမဖယ်ကျဉ်ကျောခိုင်းသွားလေပြီ။ တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းသွားသောသူမခြေလှမ်းတို့သည် အသက်မဲ့နေပါ သည်။ သူမခြေလှမ်းကိုတုံ့ခနဲရပ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် လှိုက်ခနဲမောသွားမိသည်။ အို….သူမနောက်သို့ပြန်လည် ငဲ့စောင်းကြည့်လေမည်လား။ သူမခေါင်းလေးတနွဲ့နွဲ့စောင်းလှည့်လာ၏။ သို့သော် ချက်ချင်းပင်ရှေ့သို့ ပြန်မတ်သွားသည်။ နောက်သို့ပြန်လှည့်မလာ။ သို့သော် ရှေ့သို့လည်းဆက်လှမ်းမသွားသေးဘဲသူမကျောပြင်သည်တသွဲ့သွဲ့ခါရမ်းနေသည်။ အို…စိတ်ပုပ်မလေးရယ်၊ မင်းငိုများနေလေသလား။
ကျွန်တော်ဦးခေါင်းကိုခါရမ်းပစ်လိုက်သည်။ မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်တချို့ကို မသိကျိုးနွံ့ပြုကာမိုးသားပြင်ဆီသို့အကြည့်ကိုပို့လွှတ်မိသည်။ လရောင်သည် တိမ်မည်းတို့ကြားမှ လဲ့လဲ့လေးသာ ဖြာစီးလျက်။ တရှပ်ရှပ် ကျွန်တော်နှင့်ဝေးသွားသော ခြေသံတို့ကို နှလုံးသားနားနှင့် ကျယ်လောင်စွာကြားနေရသည်။
ထို့သို့သဖြင့်……………………..။ ။ ။
အဖြစ်အပျက်တို့သည် အိပ်မက်မြူနှင်းများ ဝေထုံဆိုင်းညှို့။ တလွင့်လွင့် ဝေးကွာခဲ့။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက ခုံတန်းလျားလေးသည်မပြောင်းလဲ။ လမ်းလေးသည်လည်း အရင်အတိုင်းသာ အိုဟောင်းမြဲ။ တစ်ယောက်တည်း တိတ်ဆိတ်ငေးစက်စွာ၊အဓိပ္ပာယ်မဲ့စွာ ထိုင်နေမိသည်။ လမ်းအိုလေးအပေါ်တွင် လရိပ်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကအတိုင်းပင် ဖျော့တော့စွာ ဖြာဆင်းနေပါသည်။ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်မိတော့ ငှက်ကလေးနှစ်ကောင် ၀ဲပျံသွားသည် သည်ကို လရောင်ဖျော့ဖျော့ကြားမှ ၀ိုးတ၀ါးတွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုငှက်ကလေးနှစ်ကောင် ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်သို့ ပျံသွားလေမလား။ ကျွန်တော် စိုးရိမ်တကြီးတွေးမိသည်။
ထိုအခိုက် မှုန်ဖျော့ဖျော့ကြယ်လေးတစ်ပွင့် ခပ်ဝေးဝေး ကောင်းကင်တစ်နေရာမှ လွင့်ဝဲကြွေကျသွားသည်။
ကျွန်တော့် ရင်သည် အုံ့မှိုင်းပြာအက်ဆဲ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:07 AM